River Learning Center – Soomaaliga – Great River Passage
Arag dhulka, biyaha, iyo dhaqanka Wabiga Mississippi (Mississippi River).
Rugta River Learning Center waa barnaamij ay magaaladdu wadato oo isku dara isticmaalka-isku jira, goob xooga saarta wabiga iyo Xarumaha Adeega Barxadaha ee Qaranka (National Park Service Headquarters) ee Crosby Farm Regional Park, oo u adeega siddii albaab qaran oo laga galo Wabiga Mississippi (Mississippi River) iyadoo sannadka oo dhan wabiga wax lagu baranayo iyo ku faakihaysiga dibada ee hareeraha wabiga St. Paul.
Jaan-goynta Naqshada iyo waqtiyada xiriirinta
Mashruuca Marinka Ilaalinta Bay’ada ee Wabiga Balaaran (Great River Passage Conservancy) iyo Magaaladda St. Paul (City of Saint Paul) waxa ay la shaqeynayaan qolo Magaaladda New York xaruntoodu tahay oo la yiraa (W Architecture & Landscape Architecture) si ay u hogaamiso habka jaan-goynta iyo naqshadeynta ee rugta River Learning Center.
Jaan-goynta naqshada waxaa ku jira daraasad rugta ah, u kuurgelida qadiyada naqshada, bixinta guudmar guud oo ku saabsan barnaamijyada iyo waxyaabaha aasaasiga ah ee rugta River Learning Center iyo helida ra’yi guud oo ku saabsan muuqaalka iyo dareenka mashruuca. Midigta waxaa ku qoran jadwalka waqtiga ee xiriirinta nidaamkan.
Kooxaha gaar wax u eegida
Kulanka beesha ee kumbuyuutarka lagu qababayo
Afitda beesha ee #1
Kulan beeleed si loo eego naqshado cayn kale ah
Afitda beesha ee #2
Dib u eegida ugu dambaysa ee aragtida naqshada kalida ah ku saabsan
Daahfurka jaan-gooyada naqshada iyo xusida beesha
Maalgeliyeyaasha iyo Is-kaashiyada:
Shakhsiyaadka Deeq-bixiyaasha ah ee Qarsoon
Maantaba ku Deeq!